Nzira Yokuita Nenyika England Clam Chowder | A Couple for the Road
New England Clam Chowder ndeyekuAmerica, inotendwa kuendeswa kune nechokumaodzanyemba kwakadziva kumadokero nemaFrench ekupinda munyika ye1700s. Yakawedzerwa mukuzivikanwa seyakagadzikana, yakagadzirirwa chikafu kusvikira ichizozivikanwa nekushumirwa pa Ye Olde Union Oyster House muBoston ku1836 - iyo nhasi ndiyo yakare-kare inoshandisa yekudya muUnited States.
Nhasi, New England Clam Chowder iri tsika dzeAmerica, uye chimwe chinhu chakanakisisa chaiva nechokuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States chakatarisa gungwa. Pane chimwe chinhu pamusoro pekudya ichi chinodziya, chinonyaradza, uye chinokuita iwe uchida zvimwe!
Servings: 6 vanhu
2 lbs littleneck clams pamusoro pe20
3 makapu mvura
2 inobata bhakoni pamusoro pe2 oz, zvakagadzirwa zvakanaka
1 medium-size onion zvakagadzirwa
2 celery mapesi nemashizha zvakagadzirwa
2 tablespoons mafuta
2 tablespoons furawa yechinangwa chose
2 medium-sized potato peeled uye fely diced
1 mukombe mukaka wose
1 mukombe heavy cream
munyu uye pepper kuti tate
Bvunza fishmonger yako kana zvidimbu zvakatsvaga kuti ibvise jecha; kana zvisingaiti, kana kuti kana usina mubvunzo, ipapo svetura majekesi zvakanaka uye uvhare nemvura inotonhora kwemaawa 1-2, uchichinja mvura kamwechete.
Drain the clams. Isa muhari neikombe cha 3 mvura uye kupisa pamusoro pemoto wakareba, wakafukidzirwa. Maminitsi mashomanana mushure mokunge majekesheni atanga kuvira, bvisa chifukidzo chekuona kana vose vakazarurirwa. Kana zvisingaiti, chengetedza uye chengetedza mune imwe miniti (nguva yokubika inobva paukuru hwenyoka).
Pane imwe nguva majekesheni akazarura, bvisa kubva pakupisa uye tumirai majekesti nematanda kune imwe ndiro yekutonhorera, kuve nechokwadi chekuchengetedza iyo yose yekubika mvura muhari.
Muhombodo huru, yakashata-bottomed kana chiDutch, vheka bhekoni pamusoro pepakati-yakanyanya kupisa kwe 2-3 maminitsi, kana kusvika kusvika yakabikwa, zvichiita kuti zvive nyore. Wedzerai onion uye celery, pamwe chete nechinoti munyu uye pepper. Wedzerai 2 tablespoons yehutoro uye kuderedza kupisa kusvika pasi. Pheka, zvichikuvadza, dzimwe nguva, kusvikira anyanisi echitenderera uye achinyoroveswa, pamusoro pemaminitsi e6.
Ita mukati mezvigunwe zve 2 zveupfu uye ramba uchibika, zvichikurudzira, kune imwe 1-2 maminitsi. Wedzerai yakachengetwa kubika mvura kubva kumapapiro uye simbisa zvakanaka.
Wedzera kupisa kusvika kumusoro kuti uuye nekumvura. Wedzerai mbatatisi, kuderedza kupisa kunomira, uye kuvhara. Rega muto ubike, uchifambisa pane dzimwe nguva, kusvikira mbatata yanyorova, inenge maminitsi e20 (kana yakasarudzwa kusvika kune disi yakanaka).
Parizvino, bvisa nyama yakagadzika kubva kumahombekombe nemabhuru uye isa parutivi.
Rambai mahombekombe, asi iva nechokwadi chekuchengetedza chero mvura inonaka uye kuiwedzera iyo yemuviri. Kana uchida, kana kana zvidimbu zvakakura zvikuru, unogona kudzvora nyama.
Kana kamwe mbatatisi yakagadzirirwa zvizere, wedzera mukaka nekamuti kune muto, uye svetura zvakakwana pasi pemhepo yakadzika. Usanyatsoomesera muto kana mukaka nekamu zvange zvawedzerwa (kunyange kunyunyuta zvishoma kwakanaka).
Ita mukati mutsvuku, uye itavira kwekunwa, kuwedzera munyu uye pepper kutora. Shumira pakarepo.
Category: American, Appetizer, Food uye Drink, Massachusetts, North America, Recipes Tags: American, Boston, new england clam chowder, Recipes
← Nzira Yokushandisa Sei 2 Mazuva Akakwana muAtene